Tramp oo Si Xun Ugu Jeesjeesay Muslimiinta Kuna Faanay Dhulka Uu Yahuuda U Aqoonsaday. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
December 8, 2019 5:45 pm by admin Views: 162
Muddo laba sano ah ayaa kasoo wareegatay markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Qudus u aqoonsaday dhul ay Yahuudu leedahay.
Dalka Mareykanka ayaana waxaa maanta ka dhacay shir sannadeed ay qabsadaan koox Yahuuda u ol’oleysa oo magacooda loo soo gaabiyo AIPAC.
Madaxweynaha dalkaas oo khudbad ka jeediyay shirkan ayaa wuxuu si cad u sheegay in uu yahay ninka kaliya ee wax ka badalay taariikhda islamarkaana hir galiyay wixii ay Yahuuddu muddo badan ku taameysay oo ah inuu dhulalka Barakeysan ee Muslimiinta u aqoonsado iney iyadu leedahay sida Qudus oo kale.
Hadalkiisu wuxuu ahaa mid ay qiiro iyo farxad badan ku jirto iyadoo dhammaan kasoo qeyb galayaashu u sacbiyeen, waxaana hadaladiisii kamid ahaa.
“Yahuuda saaxiib aniga xafiiskeyga uga fiican sooma marin anigaana kuu sheegayo mudo 20 sano ah, madaxwayne kastaa waxa uu balanqaadi jiray in Qudus uu ka dhigi doono caasimada Yahuuda mana fulin jirin,laakiin markii loo fiiriyo siyaasiyintii iga horeysay aniga waan fuliyay balan qaadkeygii.
Labasano ka hor isbuucan oo kale ayaan aqoonsanay in caasimadu noqoto Qudus safaaradeenana laga furo”
Sidoo kale Trump ayaa sheegay in uu Yahuuda u sharciyeeyay dhulal kale oo taariikhi ah islamarkaana ay muslimiintu leeyihiin sida buuraha Al-jowlaan ama Golanhayd oo Suuriya ka tirsan.
Isagoo afka aad u qalqaloocinaya, sankana taagana kibir awgii ayaa mar uu arrintaasi ka hadlayay wuxuu yiri:
“Sidoo kale anigoo eegayo amaanka Yahuuda waxaan aqoonsaday in buuraha golan hay ay leedahay Yahuuda, arintaas oo mudo ay ku dhici waayeen kuwuu iga horeeyay. Aniga waxaan kaloon yahuuda ku taageernay in weerarada ay ku qaadeyso argagixisada ay yihiin isdifaacid”
Trump waxa uu sidoo kale ku faanay in ay dhaqaalihii ay siin jireen maamulka cabaas ay ka jareen dhaqaalahaas oo gaarayey 600 milyan dolar sanadkii asigoo ku macneeyay in waxa uu ugu yeeray argagixisada xamaas la siiyo.
Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyeyaal hore oo ay arrimaha Qudus kala sheekeysatay Shabakadda Amiirnuur.com ayaa sheegay in arrinta Qudus ay tahay arrin caalami ah, waa qadiyad Muslimiinta oo dhan ka dhaxaysa, waxaana ay maanta xaaladdu mareysaa in masjidka barakeysan ee Al-aqsaa iyo qibladii hore la siiyo Yahuuda, walibana Muslimiinta la yiraahdo sidaas ayaan sameynay ee maxaad ka geysan kartaan?